Nuxurka khudbadihii laga jeediyay caleema saarka Axmed madoobe - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Nuxurka khudbadihii laga jeediyay caleema saarka Axmed madoobe
October 12, 2019 Duceysane455
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimaya oo lagu caleema saarayay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa kasoo qeybgalay Mus’uuliyiin kala duwan.
Mas’uuliyiintii halkaa ka hadashay ayaa intooda badan qudbadahooda laga dareemayay dhaliilo ay u soo jeedinayaan dowlada federalka iyo weliba talooyin ah in sharciga ay dowlada ilaaliso.
Mas’uuliyiintii ka hadashay munaasabada ayaa waxaa ka mid ahaa;
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qudbadii uu jeediyay ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday doorashada la qorsheynayo in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka 2021-ka waxana uu shaki geliyay suurtogalnimada doorashada isagoo sheegay in aan la fileyn inay dalka ay ka dhacdo Doorasho Qof iyo Cod ah sanadka 2021.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn u dhaliilay sida ay dowlada federalka ula dhaqantay shacabka Jubbaland isagoo ka soo horjeestey cunoqabataynta la saaray magaalada Kismaayo.
Madaxweynihii hore ee dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyay munaasabada caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu hambalyeeyay Axmed Madoobe dib u doorashada madaxtinimada Jubbaland waxana uu ugu baaqay in uu la heshiiyo dadka kasoo horjeeda kana shaqeeyaan wadajirka.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digey in Madaxweyne Farmaajo uu isku dayo in muddo kororsi uu ku dhaqaaqo isagoo sheegay in uu haysto muddo 15 bilood ah.
Isagoo ka hadlayay doorashada lagu wado in ay ka dhacdo Galmudug ayuu ku eedeeyay dowlada federalka inay farogelin ku hayso doorashadaas,waxana uu sheegay inuu ka soo horjeedo sida loo soo xulay guddiga farsamada ee doorashada Galmud ee dhowaan dowladu magacawday inay ku jiraan
Guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee Aqalka sare Abshir Bukhaari oo khudbad ka jeedinayey Xafladda Caleemka saarka Madaxweyne Axmeed Madoobe ayaa sheegay in doorashadii ka dhacday Kismaayo ay aheyd mid Sharci ah oo loo maray Dastuurka dalka iyo midka Maamulka Jubbaland.
Abshir Bukhaari ayaa ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo inuu tanaasul la yimaado, isagoo xusuusiyay mid ka mid ah halku dhigyadii Xisbigiisa Tayo ee uu doorashada ku galay oo ahaa Tanaasul.
Madaxweynaha Puntland Siciid Maxamed Deni oo ahaa Madaxweynaha kaliya ee dowlad goboleedyada dalka haatan xilka haya ee ka qeybgalay xaflada caleemasaarka ayaa ku timaamay doorashadii Kismaayo inay ku dhacday si xalaal ah oo loo maray wadada dastuurka dowlada Soomaaliya iyo weliba kan Maamulka Jubbaland.
Madaxweyne Deni ayaa ugu baaqay in wadahadal lala galo dadka aan ku qancin doorashada Jubbaland isla markaana wax walba wadahadal lagu dhameeyo.
Isagoo ka hadlay doorashada qof iyo cod in ay ka dhici karto dalka Soomaaliya ayuu shaki geliyay Madaxweyne Deni waxana uu sheegay inaysan ka dhici karin sanadka 2021ka dalka Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale;
Hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya Adan Barre Ducaale oo ka mid ahaa madaxdii maanta ka qeybgashay xaflada caleemasaarka ayaa ku tilmaamay Jubbaland in ay kala dhexeyso dowlada Kenya xiriir wanaagsan ayna ka wadashaqeeyaan Ammaanka Xadka ay wadaagaan.
Isagoo ku hadlayay magaca dowlada Kenya ayuu hambalyo u direy Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe isagoo ku tilmaamay mas’uul si wanaagsan uga shaqeeyay sidii ay ammaan u noqon lahayd xadka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa qudbadii uu jeediyay waxa uu ku sheegay in maanta Soomaaliya ay u baahan tahay in la badbaadiyo,loogana baahan yahay waxgaradka Soomaaliyeed inay ka qeybqaataan badbaadinta dalka.
Cabdikariin Guuleed ayaa si gaar ah waxa uu ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo in uu ilaaliyo midnimada dalka uuna qanciyo maamul goboleedyada dalka iyo Siyaasiyiinta.
Cabdiraxmaan Maxamed Faroole
Senetor Cabdiraxmaan Maxamed Faroole Madaxweynihii hore ee Puntland ayaa qudbadiisa waxa uu ku sheegay in dowlada Soomaaliya ku fashilantay horumarinta dalka.
Senator Faroole ayaa sheegay in ficilada maanta ay waddo dowladda Soomaaliya ay yihiin burburin iyo kala qeybin,isagoo ku eedeeyay in dowladu ka soo horjeedo nidaamka federaalka.
Senator Muuse Suudi
Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka mid ah xubnaha aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay xaflada Caleemo-saarka Axmed Madoobe ee ka dhacday Kismaayo ayaa sheegay in aysan jirin heshiis laga raadinayo oo dhexmari lahaa isaga iyo Madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira.
“Madaxweyne Farmaajo labada lugood mid Puntland ayaa ka goosatay mida kalena Jubbaland, gacanta midigna waxaa uga dhegan Galmudug, waxaa soo haray Calool iyo iyo Af iyo gacan bidix ah oo aan waxba lagu cuni karin,” ayuu yiri Senator Muuse.
Waxaa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uusan cidna rabin, isla markaana, sidoo kalena uu ka shaqeynayo oo kaliya iska horkeen.
Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame;
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qudbadiisa xaflada caleema saarka waxa uu ku sheegay in haddii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay isku daydo in wadadii loogu tala galay doorashada ay ka leexiso ay la kulmi doonto dhibaato culus.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa uga digey dowlada Soomaaliya inay isku daydo muddo kororsi iyo in aysan dhicin doorasho aan ahayn mid xor iyo xalaal ah.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa qudbadiisa Caleema Saarka waxa uu sheegay in ay socoto dadaalo lagu xalinayo wixii tabashooyin ah isagoo xusay in albaabadu ay u furan yihiin dhammaan dadka Jubbaland.
Isagoo ka hadlayay Axmed Madoobe waxyaabaha uu qaban doono ayuu sheegay in uu xooga saari doono xoreynta deegaanada maamulkiisa ka maqan, afarta sano soo socotana laga dareemi doono Jubbaland horumar iyo barwaaqo.
Axmed Maxamed Islaam Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inuu wadahadal la galayo Madaxweyne Farmaajo uuna ku casuumayo magaalada Kismaayo.
Dhageyso: Galmudug oo Canshuur ku soo rogtay Qaadka